Qubanaha » Wasiir Juxa “Dowladdu Musharax ay si gaar ah u wadato ma jirto
Wasiir Juxa “Dowladdu Musharax ay si gaar ah u wadato ma jirto
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay inay kor-joogta ka yihiin doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo hada ka socota magaalada Jowhar.
Wasiir Juxa ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in dowladda Federaalka ay Musharax gaar ah wadato, isagoo xusay in aanay jirin Musharax ay si gaar ah u taageersan yihiin.
“Anaga doorashada wax faragelin ah kuma lihin, kor-joogto ayaa ka nahay, Musharax ay dowladda wadato ma jirto”ayuu yiri Wasiir Juxa oo ka mid ah Wafdi dowladda Federaalka ka socda oo ka qeyb galaya doorashada.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in 8 Musharax cidii soo baxday ay ka rajeynayaan inuu isu doono dadka reer Hirshabeelle, ka dowlad ahaan ay xasiloonida, nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ay kala shaqeyn doonaan Musharaxii guuleysta.
“Cida wax dooraneysa waa Hirshabeelle, waxaa rajeynayaa in 8 Musharax halkaan joogta in mid uu si xalala ah ku soo baxo”ayuu yiri Wasiir Juxa.
Qaar ka mid ah Musharaxiinta ayaa ku dhaliilay dowladda Federaalka inay taageersan yihiin Musharaxiin gaar ah, kaddib markii qaar ka mid ah musharaxiinta ay Muqdisho kula soo kulmeen Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Saddex Musharax ayaa aad loogu saadaalinayaa in midkood uu ku soo bixi doono doorashada, sida Maxamed Cabdi Waare oo horay xilkan ugu tartamay, Daahir Cabdulle Cawaale iyo Cabdi Faarax Laqanyo.